Football Khabar » मेस्सी र अर्जेन्टिनालाई कतारका प्रशिक्षकले दिए यस्तो कडा चेतावनी !
मेस्सी र अर्जेन्टिनालाई कतारका प्रशिक्षकले दिए यस्तो कडा चेतावनी !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा आज समूह चरणको अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिना र आगन्तुक टिम कतार खेल्दैछन् । समूह चरणको अन्तिम खेलबाट यी दुवै टिम स्पष्ट जित निकालेर अन्तिम आठमा जाने दाउमा छ ।
हाल दुवैको खातामा मात्रै १–१ अंक भएकाले दुवै टिमलाई अर्को चरण जान राम्रो गोलअन्तरमा जित आवश्यक छ । यदि यो खेल बराबरीमा रोकिए दुवै टोली अर्को चरण जानेछैनन् । त्यो बेला पराग्वेलाई फाइदा पुग्नेछ, यदि ऊ आफ्नो खेलमा कोलम्बियासँग पराजित भए पनि ।
कतार र अर्जेन्टिनाको खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै कतारका प्रशिक्षक फेलिक्स सान्चेजले अर्जेन्टिनी टिमलाई कडा चुनौती दिएका छन् । उनले आफूहरू ब्राजिल प्रतिस्पर्धा गर्न आएको बताउँदै अर्जेन्टिनाका खेलाडी लिओनल मेस्सीसँग तस्बिर खिचाउन नआएको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सान्चेजले भने–
‘अर्जेन्टिना यो खेलमा जितेका दाबेदार हो । किनभने, उनीहरूसँग मेस्सीजस्ता विश्वस्तरका खेलाडी छन् ।’
‘हामी आफ्नो योजनाअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं, हामी एक ठूलो टिमविरुद्ध खेल्न गइरहेका छौं ।’
‘मेस्सी यस खेलका निर्णायक तत्त्व हुन्, उनले खेललाई जतिसुकै बेला पनि बदल्न सक्छन् ।’
‘हामी अर्जेन्टिनाको सम्मान गर्छौं । तर, हामी यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न आएका हौं, मेस्सीसँग तस्बिर खिचाउन होइन ।’
कतारका प्रशिक्षक सान्चेज विगतमा बार्सिलोनाका प्रशिक्षक थिए । तर, उनले मेस्सीलाई भने कहिल्यै पनि प्रशिक्षण दिएनन् । सान्चेज सन् १९९६ देखि २००६ सम्म बार्सिलोनाका प्रशिक्षक थिए ।
सान्चेजले मेस्सीको तारिफ गर्दै उनलाई खेलमा रोक्न कठिन हुने पनि बताए । ‘म बार्सिलोनामा प्रशिक्षक थिएँ । तर, मैले मेस्सीलाई प्रशिक्षण गरिनँ,’ सान्चेजले भने, ‘बार्सिलोना पुगेदेखि उनी विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा रहँदै आएका छन् ।’
उनले अघि थपे, ‘यस खेलका लागि मसँग थुप्रै योजना छन् । तर, मेस्सीलाई रोक्न ज्यादै कठिन हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति ८ असार २०७६, आईतवार ०५:५०